Kasta oo hadda ka dibna, waa in aad kala cadeeyo taariikhda iPhone aad. By sidaas samaynaya, waxaad sii daayo doonaa meel bannaan oo qaar ka mid ah sidaas darteed laguu ogolaado in aad iPhone in ay sii wadaan si dhakhso ah. Sidoo kale, waxaad u masixi doono oo dhan raad dhaqdhaqaaqa. Tani waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh ee kiiska kaa lumo telefoon, ama qof xaday.
Si aad u taariikhda iPhone oo dhan, waxay noqon lahayd inaad u samayn ka ah meelo kala duwan ka yar. Waxaad lahaa si ay u helaan Safari oo ay nadiifiso aad taariikhda dhirta Safari. Markaas waxaad lahaa si ay u helaan taariikhda wac, threads fariin aad iyo tirtirto dhammaan faylasha gacanta. Nasiib wanaag, waxa jira barnaamij u doonaysid ilmahaaga Windows ama Mac computer in ay nadiifiso doonaa taariikhdaada iPhone oo dhan iyadoo hal click. Barnaamijka Taasi waxaa loo yaqaan Wondershare SafeEraser.
Qaybta 1. Mid ka mid ah click in ay nadiifiso dhammaan diiwaanka taariikhda on iPhone
Qaybta 2. hab Common in ay nadiifiso taariikhda raadinta on iPhone
Qaybta 3. hab Common in ay nadiifiso taariikhda fariin ku iPhone
Qaybta 4. hab Common in ay nadiifiso app khasnado on iPhone
Qaybta 5. hab Common in ay nadiifiso email khasnado on iPhone
Click Qaybta 1.One in ay nadiifiso dhammaan diiwaanka taariikhda on iPhone
Wondershare SafeEraser waa aalad tirtiro xogta xirfad leh ujeedooyin badan. Codsigan waa kaamil u iDevice kasta. Waxaa ugu horayn waxa loogu talagalay in lagu tirtiro dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ka qalab aad. Haddii aad tirtirto xogta aad gacanta, waxa si fudud loo soo kabsaday karaa iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah. Taasi waa sababta codsigan US isticmaalaa Creech Military overwriting technology, si aan innaba loo faylasha loo soo kabsaday yaabaa, weligood. Tani waa mid aad waxtar u leh haddii aad iibiso aad telefoon, ama ay dhacdo in aad lumiso ama xaday uu.
Halkan waa hage fudud ku saabsan sida loo isticmaali SafeEraser Wondershare u tirka taariikhda iPhone aad.
La baneeyo taariikhdaada iPhone oo dhan hadda waxaa la samayn karaa iyada oo mid ka mid click.
1. Open Wondershare SafeEraser iyo dooran masixi Private Data
2. Barnaamijka waxaa si toos ah u bilaabi doonaa shaandheynta iyo baar xogta ku saabsan qalab aad.
3. Marka scan la dhammeeyo, xogta gaarka loo leeyahay oo dhanna waxaa loo qori doonaa qaybaha oo kala duwan. All inaad samayso waa in aad doorato oo macluumaadka aad rabto in aad tageen, waayo, waxyaalaha wanwanaagsan. Ka dib marka aad sidaas samayso, guji hadda masixi.
4. Ka hor inta aadan masixi xogta oo dhan, waxaad u baahan doontaa si loo xaqiijiyo falalka adigoo garaacaya ereyada "tirtirto" sanduuqa bixiyo. Markaas, guji masixi Hadda mar kale.
5. Marka dhammaan faylasha ee aad dooratay ayaa la tirtiray, waxaad arki doontaa fariin soo socda.
Iyo in ay tahay! Dhammaan xogta aad la tirtiray in tallaabooyin yar oo sahlan. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaad tirtiri kartaa faylasha aad gacanta (laakiin kuwaas oo doonaya in ay dib markii Wondershare SafeEraser?) Iyadoo la tirtirayo taariikhda raadinta, taariikhda browser, taariikhda fariin, app khasnado, iyo email khasnado si gooni gooni ah. Ha noo tuso sida.
Si loo cadeeyo taariikhda raadinta aad iPhone, waxaad u baahan tahay inaad masixi taariikhda browser aad. Tan iyo markii ay jiraan wax ka badan hal browser diyaar u ah iPhone, waxaan ku tusi doonaa sida loo masixi taariikhda dhirta aad ee laba daalacashada iPhone ugu caansan - Safari iyo Google Chrome.
# 1. Clear Safari Browser History on iPhone
1.From gurigaaga tuubada screen on icon Settings oo fur guddiga gacanta ku Settings.
2.Locate Safari ee Settings ka taliyaan guddiga. Marka aad ka helaysaan, ka jaftaa ku yaal.
3.Once aad taabtay icon Safari ah, raadiyo badhanka Clear History iyo Website Data. Markaas, ka jaftaa badhanka.
4.The tallaabo dambeeya waa in la xaqiijiyo in aad rabto in ay nadiifiso taariikhda.
# 2. Clear Chrome History Browser on iPhone
1.In si ay u masixi taariikhda dhirta Google Chrome, waxaad u baahan tahay in aan bilowno app ugu horeysay.
2.Tap menu Chrome (saddex khadadka siman gaaban) ka dibna ay helaan menu Settings ah.
d 3.Tap button gaarka ah.
4.Click ku button Tirtir History.
5.Confirm falalka aad.
Marka ay timaado in taariikhda fariimaha, waxaad tirtiri kartaa wadahadalka oo dhan qof, ama (haddii aad isticmaalayso macruufka 9 ama wax ka sareeya) tirtirto farriimaha kaliya la doortay. Waa kuwan sida.
1.Tap on Messages iPhone tab ka screen guriga.
2.Once in Messages ah, ka jaftaa edit dooro threads aad rabto deleted.Then, delete.This jaraa'id tirtiri doonaa dhamaan fariimaha qof gaar ah ama dad gaar ah.
Si aad u tirtirto farriimo gaar ah ka wada hadal ah, waxaad u baahan tahay in la furo wada hadal ah in marka hore. Marka aad ku sugan tahay wadahadalka dooro fariin aad rabto in aad tirtirto. Markaas, aad u masixi karaan gudaha ka dunta adigoo riixaya badhanka edit ah, ka dibna Delete.
Si kastaba ha ahaatee, la tirtiro fariimaha sidan oo kale ma iyaga si joogto ah masixi. Waxay si fudud loo soo kabsaday karaa baadhi magaca xiriir ah ama qaar ka mid ah keywords ka fariin. Habka keliya ee lagu tirtirto farriimaha si joogto ah u noqon adigoo isticmaalaya software dhinac saddexaad ah, sida Wondershare SafeEraser lahaa.
La baneeyo app khasnado, aka files junk, ka iPhone ku siin karaan qalab aad war muhiim ah in shuruudaha ay xawaaraha. Nasiib darro, ma jiro ikhtiyaar ah oo ku saabsan iPhone in ay nadiifiso app khasnado. Waxaad tirtiri kartaa Safari khasnado oo keliya, ama waraaqaha app ah iyo xogta. Laakiin, iyadoo xogta la tirtiro app ee aad sidoo kale laga yaabaa in ay tirtirto files muhiim gaar ah (tusaale ahaan tirtiro app xogta Viber tirtirto laga yaabaa oo sanamyadeedii aad heshay on Viber).
La baneeyo khasnado Safari ayaa waxaa kor lagu soo sharxay. Waa sidan sidii in ay tirtirto xogta app.
1.Go in Settings> isticmaalka Guud> Maamul Kaydinta.
Tubada wax la doonayo in Documents iyo Data. Markaas, waxaad samayn lahaydeen oo dhan waa slide waxyaabaha aan loo baahnayn in bidix iyo tuubada Delete.
Nasiib darro, si toos ah la tirtiro email khasnado ka iPhone waa wax aan macquul aheyn, sida la tirtiro khasnado app. Laakiin, waxa aad samayn karto waa in aad tirtirto ku lifaaqan email aad. Laga yaabaa in aadan ka war intee in meel bannaan oo ku lifaaqan, kuwaas oo qaadan kartaa ilaa. Xalka ugu wanaagsan ee lagu gebi ahaanba la tirtiro lahaa xisaab email aad. Ha welwelin kuma aad waayi doontaa emails, kaliya ee ku lifaaqan aan loo baahnayn (oo aad mar dambe soo bixi kartaa haddii aad u baahan tahay). Ka hor inta tirka aad email, hubiso in aad ogtahay sirta.
Si aad u tirtirto account email Settings furan oo aad ka dibna tubbada ku Mail, Xiriirada, Calendar.
Markaas, riix magaca akoonka, hoos loo hormariyo Delete Account. Marka aad sidaas samayso, dar aad xisaabta mar kale. Sidaas, waxaad masixi doono oo dhan oo ka mid ah ku lifaaqan email aan loo baahnayn oo weli ay helaan aad email.
> Resource > Clean-up > Sida loo Cad History on iPhone